Shariif Xasan Oo Raba In Shirka Baydhabo Lagu Dhiso Maamulka Sadex Gobol Oo Kali Ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Gudoomiyihii hore ee Baarlamaankii KMG ahaa ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa qaba in shirka ka socda magaalada Baydhabo lagu dhiso maamul goboleed loo sameynayo 3 gobol oo kaliya.
Qolooyinka wada shirka ka socda magaalada Baydhabo ayaa doonaya iney dhisaan maamul goboleed loo sameynayo 6 gobol, arrinkaas oo dhaliyey khilaaf maadaama maada 3 gobol oo ka mid ah 6-da gobol ee ay doonayaan uu ka jiro maamul kaasoo lagu magacaabo JUBA.
Shariif Xasan ayaa sheegay inuu aaminsan yahay haddii la dhiso maamul sheeganaya 6 gobol aanay dowladda Soomaaliya aqoonsan doonin, ayna taa badelkeeda sax tahay in maamul loo dhiso gobollada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
“Anigu waxaan qabaa in shirka Baydhabo lagu dhsio maamulka 3 gobol, hadii lix maamul la dhiso maamulla 6 gobol dowladda ma aqoonsan doonto” ayuu yiri Shariif Xasan oo la hadlay Idaacadda Risaala ee Muqdish.
Xildhibaan Shariif Xasan ayaa ku baaqay in la qaato amarada dowladda, isla markaana wixii dowladda ogoshahay la dhiso, si dadka dhibaatada uga baxaan, maamul la isku raacsan yahay la sameeyo.
Wuxuu sheegay Shariif Xasan in marka uu waqtigu ka dhamaado dowladda hadda jirta afti loo qaadi doonto arrimaha maamulada gobollada, sidaas darteedna ay fiican tahay in la raaco wax ay rabto dowladda Soomaaliya.
Gobollada muranku ka jiro ee Shariif Xasan leeyahay halaga reebo maamulka lagu dhisayo shirka Baydhabo ayaa kala ah: Jubada Hoose, Jubada Dhaxe iyo Gedo, kuwasoo uu ka jiro maamul uu hogaaminayo Sheekh Axmed Madoobe.
1-dii bishaan Janaayo 2014 ayaa madaxweynaha Soomaaliya wareysi uu siiyey warbaahinta dowladd ku sheegay iney soo dhaweynayaan shirka Baydhabo iyo in dadku sameystaan maamul, hase ahaatee asan aqbali doonin in la dumiyo maamul horay u jiray.